Hatramin'izao dia ny Repoblika Maldives no ivon'ny fizahan-tany elitika, izay ahafahanao miala sasatra miaraka amin'ny fiontanam-poana amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Ny rivodoza tropikaly amin'ireo nosy, izay tondroin'ny akaiky azy amin'ny alàlan'ny ekoatera, dia manome na dia ny toetr'andro mafana aza, tsy misy fiantraikany be loatra amin'ny hafanana sy ny ranonorana mandritra ny taona. Na izany aza, na dia eo aza ny zava-drehetra, raha mandalo fitsangatsanganana ho an'ny Maldives ianao, dia mbola mila miezaka ny mahafantatra tsara ny toetr'andro izay miandry anao any amin'ireo nosy.
Ny toetrandro any Maldives amin'ny ririnina
Desambra . Amin'ny volana voalohany amin'ny ririnina, ny monsoon avaratra-atsinanana dia manjaka amin'ny Maldives. Mandritra io vanim-potoana io, ny rahona ao amin'ireo nosy dia tena maina sy mafana, ary ny ranomasina dia tena tony. Amin'ny antsalany, ny hafanan'ny rivotra amin'ny volana Desambra dia tsy latsaka ambany + 29 ° C amin'ny andro, ary + 25 ° C amin'ny alina, izay hanaiky anao, mazava ho azy fa tsy mifandray amintsika amin'ny ririnina. Ny hafanana amin'ny rano ao amin'ny Maldives amin'ny volana Desambra dia 28 ° C.
Janoary . Mandritra io vanim-potoana io dia tsy afaka mifaly akory ny toetrandro any amin'ireo nosy: masoandro mamirapiratra mamirapiratra, lanitra madio ary ranomasina mahazatra. Ny mari-pana isan'andro isaky ny volana Janoary dia 30 ° C, ary amin'ny alina ny hafanan'ny rivotra dia manidina hatramin'ny 25 ° C. Ny ranon'ny Ranomasimbe Indiana dia samy mandray vahiny sy mandray azy avokoa - 28 ° C.
Febroary . Misaotra ny toetr'andro mafana sy mangina, ity volana ity ao amin'ny Maldives dia heverina ho fotoana tsara indrindra hanaovana fialam-boly, ary koa ny tsara indrindra ho an'ny fiantsonan-daka, satria mandritra io vanim-potoana io dia misy fahitana tsara ny rano. Tsy miova ny mari-pana amin'ny rivotra sy ny rano - + 30 ° C ary + 28 ° C.
Ny toetrandro any Maldives amin'ny lohataona
Martsa . Tany am-piandoham-bary, ny toetrandro any Maldives dia mbola misy fiantraikany amin'ny monsoon avy any avaratra atsinanana, ary manohy mampifaly ireo mpizahantany amin'ny toetr'andro mahafinaritra ihany koa ny zava-drehetra. Mafana kokoa ny andro, ary mihamafana ny ranomasimbe. Ny hany zavatra mety hampangirifiry anao dia ny mety hisian'ny rivo-doza iray, fa aza manahy - tsy afaka manimba anao na ny natiora. Ny mari-panaovana marainan'ny martsa amin'ny andro any amin'ny Maldives dia 31 ° C, amin'ny alina - +26 ° C, ny mari-pana amin'ny rano + 29 ° C.
Aprily . Ity no malaza, fa tsy manambany, volana ao Maldives. Eo ambany fiantraikan'ny taratra manjelanjelatra manjelanjelatra, ny hafanan'ny rivotra dia tonga amin'ny tampony: + 32 ° C amin'ny andro sy 26 ° C amin'ny alina. Ny hafanana amin'ny ranomasimbe dia mbola tsara ho an'ny fandroana - + 29 ° С. Na izany aza, mandritra io vanim-potoana io, indraindray ny toetrandro dia mety ho simba noho ny oram-baratra manjelatra.
May . Ny môsonika avaratra-atsinanana dia misolo ny mozika atsimo-andrefana, izay mahatonga ny toetrandro ho tsy azo hinoana sy tsy azo ovaina. Afaka manokatra ny vanim-potoanan'ny orana amin'ny Maldives - nanjary lena ny rivotra ary mientanentana ny ranomasina. Mandritra izany fotoana izany, ny hafanan'ny rivotra any amin'ireo nosy dia tsy latsaka ambany + 29 ° C, ary ny rano - ambany + 27 ° С. Na dia izany aza, nandritra ny vanim-potoana dia nanamarika ny vanim-potoana faran'ny fizahantany ny Maldives.
Ny toetrandro any Maldives amin'ny fahavaratra
Jona . Ity no vanim-potoana sy rivotra indrindra any Maldives, saingy amin'izao fotoana izao dia ny mari-pana amin'ny rivodoza dia 30 ° C, ary ny rano - + 28 ° C.
Jolay . Ny afovoan'ny fahavaratra dia vanim-potoana iray izay miteraka rivotra mahery kely, fa ny toetrandro dia mbola marefo sy mamirapiratra. Na eo aza izany, ny toetr'andro sy ny rano dia mitohy mampiroborobo fialan-tsasatra - + 30 ° C sy 27 ° C.
Aogositra . August dia sarotra ny miantso fotoana lavalava hialana sasatra, kanefa na dia eo aza ny oram-batravatra, dia tsy handiso fanantenana anao ny toetr'andro. Amin'izao fotoana izao any amin'ny Maldives, ny masoandro ihany koa dia mampitony - + 30 ° C, raha toa kosa ny rano mafana manasatra ny hafanana - + 27 ° С.
Ny toetrandro any Maldives amin'ny fararano
September . Miaraka amin'ny fiavin'ny lohataona, dia mihena ny habetsahan'ny orana, raha tsy misy ny orana raha tsy amin'ny alina ihany. Amin'ny tolakandro, ny toetrandro dia mazava sy mafana. Amin'ny antsasany, ny mari-pana amin'ny rivotra mandritra ny andro dia + 30 ° C, amin'ny alina - + 25 ° C, ny hafanana rano - 27 ° С.
Oktobra . Ny rahona ny volana oktôbra dia mahalana, nefa mampahatsiahy antsika ihany koa ny orana vao haingana, ny masoandro dia mampitony foana, ary ny ranomasina dia mamela anareo hilomano. Tsy miova ny mari-pana amin'ny rivotra sy ny rano - + 30 ° C ary ny 27 ° C.
Novambra . Amin'izao fotoana izao, ny vanim-potoanan'ny Maldives dia tonga mozika any avaratra atsinanana. Tonga ny vanim-potoana nisian'ny rivotra mahery sy ny oram-be mandatsa-dranomaso, ary tonga ny fotoana nisian'ny masoandro sy ny andro mafana. Noho izany, amin'ny Novambra any Maldives no manomboka ny fizaran-taona. Ny mari-pahaizana farafahakeliny amin'ny mari-pana amin'ny andro androany dia ny 29 ° C, ny rano - + 28 ° С.
Ny zavatra rehetra takiana amin'ny fialantsasatra ao amin'ny Maldives dia visa sy pasipaoro .
Rivotra any Japon
Ny fanasan-janaka iray - inona no ilainao hahafantarana ny paradisa?
Ankizy 7 volana - fampivoarana sy sakafo
Balayazh amin'ny volon'ny veromanitra
Ny divay avy any irgi - ny fomba tsara indrindra amin'ny fisotroana toaka an-trano
Nahoana no mandoro ny sofina havia amin'ny takariva?
Lamba "Putanka" nokendrehana fanjaitra
Epifanie staphylococcus aureus
Mask Face Masira
Ahoana no fomba anaovana ny volony?
Keira Knightley dia nanolotra tafatafa nivantana tamin'ny gazetiboky Variety, izay nanoritsoritra ny asany tamin'i Harvey Weinstein, ny filalaovana filalaovana sy ny fanorisorenana
Akanjo fohy fohy - akanjo manerantany ho an'ny fotoana rehetra
Lily Rabe no lasa reny voalohany
Ny Tetezan'i Kintai